Tafiditra ao anatin’izany ny sehatry ny fampianarana sy ny fiangonana. Nandritra ny faran’ny herinandro teo dia nahazo tombontsoa manokana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ny Fikambanan’ny Masera Madinika eraky ny Fitiavana izay miparitaka manerana ny Nosy. Anjara asan-drý masera madinika ny mitaiza sy manabe ireo zaza sahirana any ambanivohitra. Koa satria mampiasa olona ry masera amin’ny asa sosialy ataony dia izay no antony nanofanana azy ireo teny Andrambato Itaosy. Nampahafantarina azy ireo ny adidy sy ny andraikiny amin’ny fitantanana ny maha olona. Anisan’izany ny fampidirana CNaPS ny mpiasa, ny fanefana ny latsakemboka. Fa nampianarina ihany koa ireo tombontsoa azon’ny mpiasa ao amin’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy : fanampiana ny fianakaviana, fandraisana an-tanana ireo mpiasa tra-doza am-perinasa na marary vokatry ny asa ary ny fisotroan-dronono. Nambaran’i soeur Agnès sy Soeur Gabrielle kosa fa tena ilaina amin’ny asan’izy ireo ny fiahiana ara-tsosialy, indrindra amin’ny asa fitoriana izay ataon'izy ireo any ambanivohitra lavitra be dia afaka manentana ny olona ihany koa izy ireo. Nangataka ny Fikambanana Masera Madiniky ny Fitiavana mba hanohanan’ny CNaPS akaiky azy ireo, indrindra ho an’ireo miasa any ambanivolo lavitra be any izay marefo tokoa.